Goethe. Kurangarira baba veGerman Romanticism | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo weGoethe, naJohann Heinrich Wilhelm Tischbein.
Johann Wolfgang von Goethe akaona mwenje wayo wekutanga wabatidzwa 28 August 1749. Anofunga vamwe baba veGerman Romanticism Aive murume akangwara uye anokwanisa kuita zvinhu zvakawanda. Nyanduri, munyori wenhau, munyori wemitambo uye musayendisiti, vakakurudzira zvakanyanya vanyori, vanofunga, vanyori, uye maartist echizvarwa chinotevera uye kwese kwese. Nhasi ndinopemberera gore rayo rekuratidzira richiratidza 4 yenhetembo dzake uye makumi maviri emitsara yake.
2.1 Husiku hwakanaka
2.2 Kunyura kwezuva rehupenyu
2.3 Rudo rusina zororo
3 20 mitsara
Johann Wolfgang von Goethe zvirokwazvo ndomumwe wevanyori vadiki uye vanonyanya kuzivikanwa, vatambi vemitambo uye vanyori venhau dzeGerman uye mumiriri wepamusoro wesangano rerudo. Basa rake rinobata mhando senge rwiyo nhetembo, nganonyorwa kana mutambo. Akarimawo kugadzirwa kwesainzi pamisoro senge bhotani kana a dzidziso yemavara. Uye zvakakonzera nzvimbo dzese dzekufunga, zvinyorwa uye hunyanzvi mune zvese.
Pakati pemabasa ake akakosha uye anozivikanwa pasi rese pasina mubvunzo mutambo wake Kubwinya, inonyanya kuratidza uye ine simba, sosi yekufemerwa uye chinhu chemhando dzakawanda. Uye enganonyorwa anomiririra zvakanyanya ari Vechidiki Werther's Misadventures o Wilhelm Meister. Mune nhetembo zvakakodzera kujekesa yake Prometeo uyewo Hermann naDorotea kana yavo MaRoma eRoma.
Surname yake inopa zita ku Institute Goethe, iyo institution inotarisira kuparadzira tsika nemutauro zveGerman pasirese. Izvi ndizvo 4 yenhetembo dzake pfupi kurangarira uye 20 mitsara zvimwe.
Ndinofanira kubva mudumba
kunogara mudiwa wangu,
uye nenhanho yekuba
Ndinodzungaira nomusango rakaoma;
mwedzi unopenya mumashizha,
kurudzira mhepo nyoro,
uye mbira, kutenderera,
kunhuhwira kwayo kunokwira kwaari.
Kutonhorera kunondifadza sei
yeusiku hwakanaka hwezhizha!
Kunonaka sei pano
Basa rakaoma kutaura! ...
Uye zvakadaro ndaizopa
Ini chiuru usiku hwakadai
kune imwe neshamwari yangu.
Kunyura kwezuva rehupenyu
shiri diki dzanyarara musango.
Mira munguva pfupi
Rudo rusina zororo
Kuburikidza nemvura, kuburikidza nechando,
Kuburikidza nedutu remhepo ini ndinoenda!
Pakati pemapako anopenya,
Pamafungu mafungu ini ndinoenda,
Nguva dzose mberi, nguva dzose!
Runyararo, zororo, zvayerera.
Kurumidza kuburikidza nekusuruvara
Izvo zvese zviri nyore
Iva muropa wekusuwa,
Iko moyo unonzwa nemoyo,
Zvinoita kunge zvese zviri kupisa
Zvichiratidza kuti ivo vaviri vanonzwa.
Ndiri kubhururuka sei?
Zvese kukonana kwaive pasina!
Akapenya korona yehupenyu,
Mufaro wakashata ...
Rudo, ndimi izvi!
Rega ndikutaurire nemaziso angu,
kubva uchizvitaura ramba miromo yangu!
Farewell chinhu chakakomba
kunyangwe murume, seni, akatsamwa!
Zvinosuruvarisa mukutota zvinoita kuti isu kunyange
chiratidzo chinotapira uye chakapfava cherudo;
chando ndinoshuva kutsvoda kwemuromo wako
sunungura ruoko rwako, rega ndibate.
Iko kushoma kwekubata, mune imwe nguva
furtive uye inomhanya, ini ndaida iyo!
Icho chaive chimwe chinhu senge precious violet,
iyo yakatanga muminda munaKurume.
Handichachekizve maruva anonhuwirira
kuti korona yako pavari.
Frances, chirimo asi kuwa
kwandiri, zvinosuruvarisa, zvichagara zvakadaro.
Kusafara kukuru, sekufara kukuru, kunogadzirisa kutaridzika kwezvinhu zvese.
Munhu anogara achizvitenda kuva mukuru kupfuura zvaari, uye anozviona seakaderera pane zvaakakosha.
Kufunga kunonakidza kupfuura kuziva, asi kushoma kunakidza pane kutarisa.
Yakanaka ndeyekuti uwane, asi zviri nani kuchengeta.
Kufunga kuri nyore, kuita kunonetsa, uye kuisa pfungwa dzako mukuita ndicho chinhu chakaomesesa munyika.
Muenzaniso wakanaka unoita zviito zvakaoma zviite nyore.
Isu takaumbwa nezvatinoda.
Kutsiva kunotyisa ndiko kuzvidza kwese kunogona kutsiva
Hapana anoziva zvaari kuita achinyatsoita, asi chakashata munhu anogara achiziva.
Munhu anoitwa nekutenda kwake. Sezvaanotenda, ndizvo zvazviri.
Rudo chinhu chakanakisa; muchato, chinhu chaicho; kuvhiringidzika kweicho chaicho nechakanaka hachimboregi kurangwa.
Chero ani anoita zvakanaka asina kuzvipira anogara achibhadharwa nechimbadzo.
Izvo iwe zvausinganzwisise, haugone kuva nazvo.
Hapana chinhu chisingakoshi pasi pano. Zvese zvinoenderana nemaonero.
Hunhu hunoumbwa mumafungu ane dutu epasi.
Pfungwa dzemunhu hadziganhurirwe kune chero miganho.
Isu tese takaganhurirwa zvekuti tinogara tichitenda kuti tiri pachokwadi.
Zvivi nyora nhoroondo, chakanaka chinyararire.
Iye murume anofara kwazvo pasirese ndeuyo anoziva kuziva hunhu hwevamwe uye anogona kufara mukunakira kwevamwe sekunge kwaive kwake.
Mamwe mabhuku anoita kunge akanyorwa kwete kuti vadzidze kubva kwavari, asi kuti vazivise izvo munyori wavo aiziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Goethe. Kurangarira baba veGerman Romanticism